Sida loo joojiyo ogeysiiska Xiriirka Spotify ee Android | Androidsis
Sida loo joojiyo ogeysiiska Xiriirka Spotify
Spotify waa codsi muhiim ah oo ku saabsan taleefannada Android ee malaayiin isticmaale ah. Haddii aad ku isticmaasho dalabkaaga wax ku soo noqnoqoshadaada ah, waa caadi inaad aragto taas ogeysiisyo kala duwan ayaa isla isla laga soo saaraa. In kasta oo ay jirto ogeysiis gaar ah oo aad u badan, taas oo dad badani u arkaan khaasatan dhibsasho.
Kani waa ogeysiiska loo yaqaan 'Spotify Connections'. Waa ogeysiis ku soo noqnoqda Android, oo aan ka saari karno, laakiin way sii socotaa. Sidaa darteed, isticmaaleyaasha qaarkood waxay rabaan inay dhammeeyaan weligood. Warka fiicani waa in tani ay tahay wax lagu gaari karo Android.
Gaar ahaan dadka isticmaala Huawei iyo Xiaomi waxay leeyihiin inbadan ogeysiiskan Xiriirinta 'Spotify'. Waxa ay tahay inaad sameyso waa inaad sugtaa illaa ogeysiiskan uu mar kale ka muuqdo taleefanka. Markay tani dhacdo, waa inaad ku sii qabataa dhowr ilbiriqsi. Kadib daaqad cusub ayaa soo muuqan doonta, taas oo aan gujineyno badhanka macluumaadka.
Waxay nagu geyn doontaa goobaha arjiga, halka aan ka galno qaybta ogeysiinta. Dhexdeeda ayaan ka arki karnaa in ogeysiisyada ku jira abka loo qaybiyay qaybo. Midka na daneeyaa waa Unclassified, oo booska ugu dambeeya.
Sida loogu daro Podcasts-ka liiskaaga Spotify
Waxaan si fudud u hubin karnaa doorashadan. Markaad sidan sameyso, waxa aan u sheegeyno Spotify waa taas Jooji muujinta noocan ah ogeysiisyada taleefanka. Marka markaad isticmaaleyso arjiga, ogeysiisyada kaliya ayaa la muujin doonaa oo ku lug leh isticmaalka dhabta ah, sida kuwa loo ciyaaro.
Waxay u maleyneysaa in waxaan ku dhammeynay ogeysiiska Xiriirka 'Spotify' ee taleefanka. Isku si u heli mayno markaan isticmaaleyno arjiga taleefankaaga Android. Markaa inaan dhammeeyo ma ahayn wax cakiran. Haddii ay ku dhibto, waxaad raaci kartaa isla talaabooyinkan si aad u joojiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo joojiyo ogeysiiska Xiriirka Spotify